India ndege dzenyika dzese: kusimudzwa kwakasimudzwa kunoparadza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India ndege dzenyika dzese: kusimudzwa kwakasimudzwa kunoparadza
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
India ndege dzenyika dzese
Mutungamiri weIndia Association of Tour Operators (IATO), VaRajiv Mehra, vakaratidza kusuwa kwavo pamusoro pechisarudzo chakatorwa neIndia Ministry of Civil Aviation / DGCA yekuwedzera kumiswa kwendege dzenyika dzese kusvika munaGunyana 30, 2021, uye nezve e-Yevashanyi Visa.
Mutungamiri weIATO akateterera kuti yakwana nguva yekuti hurumende ipindire ibatsire indasitiri yekufambisa neyekushanya.
Mr. Mehra vanga vachikurudzira kuvhurwa kwe e-Tourist visa kwenguva yakati ikozvino.
Pamusoro pezvo, mubatanidzwa wake zvese zviri kuseri kwekutangazve kwendege dzekunze uye vakatsanangura maitirwo azvo.
Akataura kuti nhengo dzeIATO dzakanyanya kushushikana uye dzakaodzwa moyo nesarudzo iyi yakatorwa nehurumende. Mr. Mehra vakati: "Inguva yekuti hurumende ibatsire indasitiri yekushanya nekumutsidzira kushanya kwakazara kuIndia," vachitsanangura zvikumbiro zvinotevera zvakaitwa kuhurumende.
Mr. Rajiv Mehra, Mutungamiri, IATO
- Kuvhura iyo e-Vashanyi Visa kune vese vashanyi vekunze vakabaiwa jekiseni uye vanoshuvira kuuya kuIndia. Rega vashanyi vekunze vasarudze kana vachida kuenda kuIndia kana kwete. Hatifanire kuvarambidza kuenda kuIndia, kana dzimwe nyika dzavhura madhoo avo kuvashanyi.
- Saizvozvowo, zvakajairika mashandiro epasi rose anofanirwa kutangwazve, uye regai ndege dzendege dzifunge kana dzichida kushanda kana kwete kana paine chero chipingamupinyi chemutoro chinhu. Asi hurumende inofanirwa kubvumidza kutangazve kwendege.
Mamwe ese madhipatimendi akamutsiridza bhizinesi ravo nerutsigiro kubva kuHurumende yeIndia, uye indasitiri yekushanya neyekushanya ndiyo yanga ichirwira kurarama kwemwedzi gumi nemana yapfuura pasina zororo zvachose. Mutungamiriri weIATO akateterera kuti hurumende inofanirwa kutsigira indasitiri yekushanya kunyanya vevashanyi vanopinda vasina bhizimusi kubva munaKurume 18.
Mazuva mashoma apfuura, VaMehra, vakapinda muchirongwa che musangano wakadaidzwa neMubatanidzwa Gurukota rezveMabhizimusi nemaindasitiri, Shri Piyush Goyal, kuti awane rubatsiro kubva kune vanotengesa kunze kwenyika pane matanho anodiwa anotorwa pakudanwa kwaMutungamiri kuti vawedzere kunze kwenyika.
Pamusangano iwoyo, VaMehra vakaratidza matanho akafanana ekubvumidza e-vashanyi mavhiza uye kutangazve kwakajairika ndege dzekunze. Akajekesawo kuna Gurukota nezve mamiriro ezvemari akange akaitwa nevashanyi panguva yedenda uye kuburitswa kweSEIS kwenguva refu (Service Export kubva kuIndia Scheme) yegore remari 2019-20 kwakakosha kuti vararame.